Namoonni 'Kopheen Seexanaa' bitatan akka deebisaniif waamichi dhiyaate - ETHIOPIANS TODAY
Namoonni ‘Kopheen Seexanaa’ bitatan akka deebisaniif waamichi dhiyaate
‘Kopheen Seexanaa’ torban darbe gabaaf dhiyaatee ture namoonni kophee kana bitatan akka deebisaniif waamichi dhiyaateera.
Kun kan ta’e kampaniin kophee beekamaa Nike himannaa dhaabbata MSCHF jedhamu biraandii isaatti fakkeessuun hojjetee gabaaf dhiyeesse irratti banee ture mo’achuu hodofeeti.
Tibba darbe dubbiin ‘Kophee Seexanaa’ dhiiga namaa soolii isaatti dabalamuun hojjetama jedhame kun dubbii ijoo turuun isaa ni yaadatama.
Kopheen kun biraandii Nike hojjetu fakkeeffamee hojjetamuun isaa ammoo dhimmichi akka gara seeraa deemu taasisee ture.
Kopheen kun urjii qara shan qabu, akkasumas ergaa Wangeela Luqaas Boqonnaa 10 lakkoofsa 18 (Seexanni akka bakakkaatti yommuu samiirraa kufu ani argeera) jedhu itti barreeffamuun hojjetame.
Kophee dabalatee kampaaniin meeshaalee ispoortiin beekamu Nike dhaabbata ‘Kophee Seexanaa’ birandii isaatti fakkeessee hojjete mana murtiitti falmee mo’atees ture.
Ammammoo dhaabbanni ‘Kophee Seexanaa’ hojjete kun akka qaama murtee seeraatti kopheewwan gabaa keessa rabsamanii turan deebisiisuun maamiltootaaf beenyaa kaffaluuf waliigalameera.
Kopheen gatiin tokkichasaa $1,018 baasu kun Nike Air Max 97s kan jedhamurraa foyyessuun hojjetame.
Kophee cimdii 666 hojjetaman keessaa hunduu rabsamanii tokko qofaatu hafee jira jedhame.
Beenyaan kaffalamu kun adabbii himannaa Nike dhaabbatichi mallattoo daldalaa koo fayyadameera jechuun dhiyeessee mo’achuu isaatiin.
Dhaabbanni ‘Kophee Seexanaa’ hojjete, MSCHF, kophee tokko hafte sana garuu ol kaawwachuuf jira jedhameera.
Waa’ee beenyaa kaffalamuu ifatti kan jedhame jiraachuu baatullee, dhimma kophee Jesus Shoes [Kophee Yesuus] jedhamu MSCHF omishuma Nike kan Air Max 97 ta’e irraa foyyeessee bara 2019 keessa hojjetee tures ni dabalata.
“MSCHF hayyama Nike malee kopheewwan kana jijjiireera. Nike garuu waa’een Satan Shoes ykn Jesus Shoes [Kophee Seexanaa ykn Kophee Yesuus] isa hin ilaallatu,” jedhe Nike ibsa baase keessatti.
Kopheewwan gabaa keessa rabsaman kana deebisanii yeroo funaananitti gatii caalaa gaafachuu danda’a. Garuu maamiltoonni yeroo omisha kana deebisan hangam akka gaafachuu danda’an hin baramne.
Nike torban darbe ture kan MSCHF seeraan himate. “Kopheen Seexanaa burjaajii uumuuniifi fedhii hir’isuun walfakkeenya kampaanii isaafi MSCHF gidduutti sirrii hin taane fida jechuun himate.
MSCHF garuu kopheewwan kunneen “hojii artii lakkoofsaan muraasa ta’anidha” waan ta’eef burjaajii uume hin qabu jedhee waakkatee ture.
Manni murtii federaalaa Nike deeggaruun Kamisa darbe ajaja dhorkaa yeroodhaaf dabarse.
Garee dhimmi seeraa abbaa qabeenyummaa kalaqaa Debevoise & Plimpton irraa kan ta’eefi bakka bu’aan MSCHF Daaviid Barnistiin, ergaa artii dhaabbanni kophee tolche kun dabarsuu barbaade himannaa seeraa dhiyaate sanaan “akka malee ol kaafame” jedhe.
“MSCHF aadaa wal tumsuu qixa-dhabaa biraandota baratameefi waa’ee muraasa gidduutti jiruufi dhiphummaa hin malle ilaalchisee yaada kennuu mala,” jechuun MSCHF “himannaa seeraa dhiyaate sana furuu isaatti gammadeera,” jedhe.
MSCHF torban darbe kopheewwan gurraachaafi diimee daqiiqaa tokko keessatti ture kan gurgure.
#Ethiopia invites #Sudan and #Egypt to nominate dam operators for data exchange before the filling of #GERD in upcoming rainy seasons